PUBG MOBILE တွင် ၁၅ မိနစ်အတွင်း CHICKEN DINNERS စားနိုင်သောLIVIK MAP အသစ် မိတ်ဆက်
PUBG MOBILE မှ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Mobile Version တွင်သာ ရရှိနိုင်သော Battle Royale Map အသစ်ဖြစ်သည့် Livik Map ကို ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် စတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ Map အသစ်ဖြစ်သော Livik တွင် ယခင်က Map များနှင့် မတူညီဘဲ အံသြစရာကောင်းပြီး ခမ်းနားသည့် Nordic Scenery ကို Battleground Theme အနေဖြင့် အသုံးပြုထားသည်။ ယခုမိတ်ဆက်
1 month ago Games & Movies • News
Story of Seasons: Friends of Mineral Town ကို PC မှာဆော့လို့ရတော့မယ်
PS One မှာ စိုက်ပျိုးရေးဂိမ်းလို့ လူသိများတဲ့ Harvest Moon က Natsume ဂိမ်းကုမ်ပဏီ နဲ့ကွဲသွားပြီး ဂျပန်နာမည်အတိုင်း Story of Seasons ဆိုပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ အခု XSEED နှင့် Marvelous ပေါင်းပြီး GBA(Game Boy Advance) မှာလဲ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Harvest Moon: Friends of Mineral Town ကို PC version အနေနဲ့ Story of Seasons: Friends of Mineral Town ကို Stream မှာ ဇူလှိုင်လ 14
Covid-19 ကြောင့် ရုပ်ရှင်တစ်ချို့ digital version စောထွက်
Covid 19 ကြောင့် ရုပ်ရှင်ရုံတွေပိတ်ပြီး အိမ်မှာပဲနေနေရတော့ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက ရုံတင်ပြီး နှစ်လလောက်စောင့်ရတဲ့ digital release တွေကိုစောစောထုတ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ ဂိမ်းကနေ ရုပ်ရှင်ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Pokemon Detective Pikachu ကိုကျော်သွားတဲ့ Sonic The Hedgehog ရုပ်ရှင်ကို မတ
4 months ago Games & Movies • News
Microsoft က 2020 ရဲ့ Xbox အသစ်ဖြစ်တဲ့ Xbox series X ကိုတရားဝင်ချပြလိုက်ပြီ
Gaming console တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Microsoft ရဲ့Xbox ကတော့ Xbox One ပြီးတော့ Sony PS5 နဲ့အပြိုင်ဖြစ်တဲ့ Xbox series X ကိုတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Xbox series X ကတော့ထွက်ရှိသမျှ Xbox series တွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံးနဲ့ performance အကောင်းဆုံး XBox လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက 4K ဂိမ်းတွေကို 60fps ကနေအမြင့်ဆုံး 120 fps
တယ်လီနောမြန်မာ နှင့် OPPO Myanmar တို့အတူ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ ၏ Mobile Legends: Bang Bang Professional League Season4အား ကျင်းပ
Moonton မှ ၎င်း၏ လူကြိုက်များသည့် Mobile Legends: Bang Bang Professional League Myanmar Season4အား ယခုလတွင် စတင်ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် ကြေညာခဲ့သည်။ ဆုကြေးငွေ စုစုပေါင်း အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ ကျော် (မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၇၅၀ ကျော်) ပေးအပ်မည့် MPL-MM S4 သည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ အကောင်းဆုံး Mobile Legends: Bang B
6 months ago Games & Movies • News
Google Stadia ထက်သာသွားတဲ့ Nvidia Geforce Now
Cloud gaming ကိုတော့ ကုမ္ပဏီတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့စမ်းသပ်ပြုလုပ်နေကြပေမယ့် Google Stadia လိုလူတိုင်း လက်တွေ့ဆော့ကြည့်လို့ရတာမရှိသေးသလောက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ Nvidia က သူ့ရဲ့ cloud gaming sevices ဖြစ်တဲ့ Nvidia GeForce Now ကို တရားဝင်ထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ သူလဲ Google Stadia လိုပါပဲ Free နှင့် Founding Member ဆိုပြီးနှစ�
Console ဝယ်စရာမလိုတဲ့ cloud gaming platform Google Stadia ဘယ်ရောက်သွားလဲ?
2019 မှာတုန်းက high performance PC တို့ gaming console တို့ ဝယ်စရာမလိုပဲ AAA title game တွေကို PC မှာပဲဖြစ်ဖြစ် TV ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်ရှိရုံနဲ့ဆော့လို့ရမယ့် Google Stadia ဆိုတဲ့ cloud gaming ကို Google ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Early access အနေနဲ့ US မှာ စမ်းဆော့လို့ရတဲ့ Founder edition ကို $129 နှင့်စတင်ရော
သင့်အကြိုက်ဆုံး Pokemon ကို vote ပေးလို့ရပြီနော်
Pokemon ကတော့ 1999 လောက်က ကျွန်တော်တို့စီမှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး တော်တော်များများလဲ Pokemon ဂိမ်းစီးရီးကိုပါဆော့ဖူးခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ 2016 လောက်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Pokemon GO ဂိမ်းလေးမှာဆို လူတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားရုံတင်မက ဒီမှာလဲဆော့တဲ့�
Coronavirus ကြောင့် တရုတ်မှာကျင်းပမည့် Overwatch League ရပ်နား
Espot League တွေဖြစ်တဲ့ Dota TI တို့ League of Legends ရဲ့Pro League တို့တွေကို နောက်ပိုင်း တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတာများလာပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ Overwatch ရဲ့ 2020 League ကို ဖေဖဝါရီလနှင့် မတ်လမှာကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားခဲ့တာ အခုဒီ ဝူဟန်ရဲ့ Coronavirus ကြောင့် ပွဲကိုရပ်နားလိုက်ပြီလို့ twitter မှာကြေညာထားတာတွေ့ရပါတယ်
ဂျပန်မှာလက်ရှိလူကြိုက်များတဲ့ anime One Piece ကို Netflix က Live Action ရိုက်ကူးတော့မယ်
Netflix ရဲ့ The Whitcher live action series အောင်မြင်သွားပြီးနောက် နောက်ထက် ရုပ်ရှင် series အသစ်တွေထပ်ရိုက်ကုးဖို့ Netflix ကလုပ်နေပါပြီ။ အဲ့ဒါကတော့ ဂျပန်မှာလက်ရှိလူကြိုက်များပြီးရောင်းအားအကောင်းဆုံး ကာတွန်းစာအုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ One Piece ဆိုတဲ့ anime series ပါပဲ။ ဒါက Netflix ရဲ့ပထမဆုံး anime live action တော့မဟုတ်ေ�
2020 မှာ Nintendo Switch ဝယ်သင့်သေးလား?
Gaming console တွေက သူ့ exclusive game တွေရှိကြတဲ့အတွက် exclusive game တွေဆော့ချင်တဲ့သူတွေက console ကိုပဲဝယ်ကြတာများပါတယ်။ Gaming console တွေက PC လို graphic setting အမြင့်ကြီးတွေမရပေမယ့် အရမ်းကြီးလည်းမနိမ့်ပေဘူး ပြီးတော့ PC လို system requirement တွေမရှိဘူးဆိုတော့ စက်မနိုင်တာတွေလဲစိတ်ပူစရာမလိုပဲဆောလြို့ရပါတယ်။ Gam
Studio Ghibli ရုပ်ရှင်တွေကို ဖေဖဝါရီလကစပြီး Netflix ပေါ်မှာကြည့်လို့ရတော့မယ်
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Disney လို့တင်စားပြီးပြောလို့ရတဲ့ Studio Ghibli က 1986 ခုနှစ်က Castle im the Sky ကနေစခဲ့တာ 2010 ကထွက်တဲ့ ငလက်မလေး Arrietty ထိ သူ့ရုပ်ရှင်တွေကတော်တော်များများ လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရုပ်ရှင်အကုန်လုံးကလဲ Disney ရုပ်ရှင်တွေလိုပဲ အကုန်လူကြိုက်များပြီး Disney Land လိုပဲ ဂျပန်မှ
Sony က ကိုယ်ပိုင် Marvel Universe တစ်ခုဆောက်နေတာလား
Sony က Marvel comics ထဲမှာမှ လူသိများပြီး လူကြိုက်များတဲ့ ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Spider-Man ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိနေပြီထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ Spider-Man ကကိုပိုင်တယ်ဆိုတာ သူတစ်ကောင်ထဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Spider-Man Universe ထဲမှာရှိသမျှ ဇာတ်ကောင်အကုန်ပါတာပေါ့။ 2018 မှာပဲ Spider-Man ထဲက ဇာတ်ေ
Sony က PS5 ရဲ့တရားဝင် logo နှင့် သူ့မှာပါမယ့် features တွေကိုချပြ
Sony ရဲ့ Playstation 4(PS4) ထွက်ရှိလာတာ7နှစ်ရှိလာပြီ။ ဒီ7နှစ်ထဲမှာ ဂိမ်းတွေကလဲ တစ်ဖြေးဖြေးနဲ့ gameplay ပိုင်းတွေ graphic ပိုင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်(60fps Max ရပေမယ့် ဂိမ်းအကုန်တော့မရဘူး)။ ပြီးတော့ အခုချိန် ray tracing အသုံးပြုတဲ့ graphic card တွေထွက်လာတော့ future proof အတွက် upgrade လုပ်ရတော့မှာပေါ့။ ဒီ�
7 months ago Games & Movies • News
Nintendo Switch နဲ့တူတဲ့ Alienware's concept UFO
￼Nintendo Switch စထွက်လာတော့ သူက full console version ဂိမ်းတွေကို handheld(လက်ကိုင်ဂိမ်းအနေနဲ့) အကုန်ဆော့လို့ရသလို သူ့ dock နဲ့လဲ TV ကိုချိတ်ပြီးဆော့လို့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးကြေညာခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ handheld ဆိုတဲ့အတိုင်း ကန့်သတ်ချက်တွေရှိတော့ graphic ပိုင်း မှာ PS4 တို့ Xbox တို့ကိုမယှဉ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Graphic
The CW ရဲ့ DC comics Arrowverse မှာ Stargirl ပါ ဝင်ပါလာ
The CW network ကတော့ DC coimcs character တွေဖြစ်တဲ့ Green Arrow, The Flash, Supergirl နှင့် Batwoman(Black Lightening နဲ့ DC's Legends of Tomorrow ကလူကြိုက်နည်းလို့) ပြီးတော့ နောက် character တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Stargirl ကို series ထုတ်ပေးလိုက်ပြီ။ Stargirl က DC's Legends of Tomorrow season2မှာ Justice Society of America(JSA) တုန်းကပါဘူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ main character တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ အခုကဒီ Stargirl က Crisis on Infinite Earth
နောက်အပတ်မှာ Arrowverse ရဲ့ နှစ်စဉ် crossover event ဖြစ်တဲ့ Crisis On Infinite Earths စပြီ
ဧပြီလမှာတုန်းက MCU ရဲ့ရုပ်ရှင်အကုန်ပေါင်းထားတဲ့ Avengers Endgame ကိုကြည့်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီဆယ်နှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲကဇာတ်ကောင်တွေကို ရုပ်ရှင်တစ်ကားထဲမှာပဲ တစ်စုတစ်စည်းထဲနဲ့ကြည့်လိုက်ရတာကတော့ တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။ DC comics က Justice League ကိုစရိုက်ခဲ့ပေမဲ့ MCU လော�
8 months ago Games & Movies • News
DC ရဲ့ Joker ရုပ်ရှင်က ပထမဆုံး R rated ရုပ်ရှင်အနေနှင့် $1 billion ဝင်ငွေစာရင်းဝင်သွား
နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ရုပ်ရှင်တွေကို အသက်အရွယ်အလိုက် G, PG, PG-13 အစရှိတာတွေခွဲခြားထားတယ်။ အဲ့ထဲမှာမှ R Rated ဆိုတာကတော့ ခက်ကြမ်းကြမ်းနှင့် ရိုင်းရိုင်းဆိုင်းဆိုင်း အပိုင်းတွေပါမယ်။ ဆဲရေးတိုင်းထွာစကားတွေပါမယ်။ R Rated တွေကိုနိုင်ငံအနျားစုက 18 နှစ်အထက်တွေပ
Brooklyn Nine-Nine က Season 8 အထိထွက်ဦးမယ်တဲ့
အမေရိကန်ဟာသစီးရီး Brooklyn Nine-Nine ကတော့ ဒီက Netflix users တွေရဲ့အကြိုက်ဆုံးဟာသစီးရီးလို့ပြောလို့ရတယ်။ 2018 မှာ Fox TV ရုပ်သံလိုင်းက ထိုစီးရီးကို ကြည့်တဲ့လူနည်းလာလို့ဆိုပြီး Season5အပြီး မေလမှာ cancel လုပ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ fans တွေအတွက် နောက် season အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ NBC ရုပ်သံလ�
2019 မကုန်ခင်ကျန်ရှိသေးတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကောင်းများ
2019 ကတော့ပြီးတော့မယ် ဒါပေမဲ့ ဒီနှစ်မှာထွက်မယ့် ရုပ်ရှင်ကားကောင်းတွေကတော့ရှိနေသေးတယ်။ အဲ့တာတွေကတော့ -Frozen22013 မှာ Let it Go နဲ့လူကြီးရော ကလေးရော ကြိုက်တဲ့ Disney ကာတွန်း Frozen ကတော့ နောက်ဆက်တွဲအသစ်ထပ်ထွက်လာပြီ။ ဒီကားမှာ Elsa က ဘယ်လိုစွန့်စားခန်း တွေပါဦးမှာလဲရယ် သီချင်